Vaovao - 2020, mety ho ny taonan'ny fanafihana Bitcoin
Vao tsy ela akory izay dia toa sahirana i Bitcoin. Na dia toa miovaova be aza ny vidin'ny Bitcoin, ny cryptocurrency dia tao anatin'ny fotoana nanamafisana tao anatin'ny roa herinandro lasa izay, taorian'ny nahavoazana 7,470 $ avo. Mandeha eo anelanelan'ny faritra avo $ 6.000 sy ny faritra ambany $ 7.000. Manaraka, ho aiza i Bitcoin?
Nandritra ny fotoana lava be, ny olona dia misalasala momba ny sandan'ny vidin'ny crypto. Nitanisa ny hafainganam-pandehan'i Bitcoin "miadana", ny hacks Ethereum, ary ny "lesoka" hafa ao amin'ny indostria izy ireo, ary nilaza fa tsy manana ho avy io sokajin-karena io. Saingy, amin'izao tontolo mikorontana ankehitriny izao dia mivoatra ny tontolon'ny macroeconomic, indrindra ny vola crypto, indrindra ny Bitcoin.
Araka ny tatitra navoakan'ny Bloomberg, Bitcoin dia manangana hery ho an'ny tsenan'ny omby lehibe. Nasongadin'ity tatitra ity fa ny taona 2020 dia ho lasa volamena nomerika i Bitcoin. “Ity taona ity dia fitsapana lehibe amin'ny fifindran'i Bitcoin mankany amin'ny vola quasi toy ny volamena, ary antenainay fa handalo ity fitsapana ity izy.”
Ny isan'ny olona liana amin'ny blockchain sy ny cryptocurrency dia mitombo
Araka ny fanadihadiana iray nataon'ny Paxful, tsena varotra bitcoin P2P manerantany, ny Amerikanina izay manana fahalalana momba ny crypto dia nampiseho fahalianana bebe kokoa amin'ny teknolojia blockchain sy cryptocurrency. Ity vondron'olona ity dia mijery hatrany ny fananana dizitaly ho solon'ny rafitra ara-bola nentim-paharazana "lesoka".
Araka ny tatitry ny fikarohana natao tamin'ny 23 aprily, dia matotra toy ny fananana ny cryptocurrency. Manakaiky ny 50% amin'ireo mpamaly no mino fa ny vonjy taitra ao anatin'ny rafitra ara-bola nentim-paharazana dia ho fotoana iray hanampiana ny olona hampifantoka ny sainy amin'i Bitcoin ho safidy hafa.
Araka ny fanadihadiana, ny fampiasana matetika an'ny Bitcoin dia misy ny fandoavana ny tena fiainana (69,2%) sy ny ady amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny kolikoly (50,4%).
Artur Schaback, tompon'andraikitra miasa ary mpiara-manorina an'i Paxful, dia nilaza tamin'ny resadresaka nifanaovana taminy: "Tsara ny manamarika fa maro ny olona mino fa ny fananganana ny mainstream dia ho tratra ao anatin'ny 6 ka hatramin'ny 10 taona ho avy. Mifanohitra amin'izany no inoan'ny sasany, fa ny iray ihany dia hipoaka ao anaty fotoana fohy ny bubble cryptocurrency. Manantena aho ny amin'ny tranga voalohany, noho izany dia mieritreritra aho fa amin'ny maha indostria antsika dia tokony hiezaka hamorona vokatra bebe kokoa isika ary hampihatra vokatra bebe kokoa amin'ny tranga fampiasana tena izy. Ampianaro hanafaingana ny fananganan-jaza mahazatra. ”
Ao anatin'ny tontolon'ny areti-mifindra satroboninahitra vaovao manerantany, mino i Paxful fa samy andrana avokoa ny cryptocurrency sy ny rafitra ara-bola nentim-paharazana, izay manazava amin'ny ambaratonga iray manokana ny fiakaran'ny vidin'ny BTC satria lasa fananana azo antoka ny BTC.
Nasongadin'i Schaback fa raha ampitahaina tamin'ny teo aloha dia tsy isalasalana fa ambony kokoa ny fahafantaran'ny olona ny Bitcoin ankehitriny. “Tsaroako tamin'izahay vao nanomboka, tsy nisy nahalala momba Bitcoin ary nieritreritra ny teny hoe 'Bitcoin' aza. Na izany aza, tamin'ny valin'ny fanadihadiana tamin'ity taona ity sy tamin'ny taon-dasa, betsaka ny olona nandre momba an'i Bitcoin. Betsaka ny olona no mampifandray azy amin'ny hevitra samihafa toy ny vola sy ny haitao. Mbola lavitra ny lalan-kizorantsika, saingy tsy andriko ny hahita vokatra bebe kokoa izay hanampy amin'ny fivelarana. ”
Mikasika ny sakana amin'ny fananganana zanaka, ny fanadihadiana dia nanamafy ihany koa fa ny 53,8% amin'ireo mpamaly dia mino fa ny tsy fahampian'ny fahalalana mifandraika dia manakantsakana ny famoahana crypto.
Araka ny tatitra dia mino ireo mpamaly fa ny antony lehibe manampy amin'ny fampitomboana ny tahan'ny fandraisana an-tanana dia ny fitrandrahana finday, ny fanarenana ny altcoin, ny fampiasam-bola amin'ny andrim-panjakana ary ny fampiasana orinasa ny teknolojia blockchain.
Ny COO an'i Paxful dia naneho hevitra momba ireo fanamby amin'ny ho avy: “Ny fanamby lehibe indrindra dia ny fahalalana momba ny cryptocurrency ihany. Fantatsika fa betsaka ny olona efa naheno an'io, saingy heveriko fa izany no antony tsy mety, toy ny filokana sy ny scam scam. Noho ireo antony ireo dia mbola manana tahotra ny mpihaino mahazatra. Amin'ny maha indostria antsika dia io no fanamby lehibe indrindra eto aminay. ”
Mitohy ny famerenana amin'ny laoniny ny ho avy Bitcoin
Taorian'ny niainany ny fihenan'ny volan'ny varotra tao anatin'ny herinandro vitsivitsy lasa izay, nanomboka nitombo ny volan'ny varotra ho avy Bitcoin. Raha ny angom-baovao farany nataon'ny CME, ny vokatra dia nahatratra haavo vaovao tamin'ny volana lasa teo amin'ny resaka kaonty mavitrika, miaraka amin'ny taha mitombo 161% isan-taona.
Araka ny tatitra dia nanamafy ny mpandrindra amerikana, ny Securities and Exchange Commission (SEC) fa ny Medallion Fund (Medal Fund) eo ambanin'ny Renaissance Technologies dia afaka miditra amin'ny tsena Bitcoin futures miroborobo izao. Ity famatsiam-bola ity dia fantatra amin'ny zava-bitan'ny fampandehanan-bola miavaka hatreto.
Raha ny angom-baovao, ny Renaissance Technology dia hanome ny fifanarahana ho avy bitcoin an'ny CME Group, CME dia iray amin'ireo mpamatsy vola bitcoin voalohany indrindra.
Ny vola mitentina 10 hetsy $ ambanin'ny Renaissance dia nalaza tamin'ny haino aman-jery. Na dia nampiditra korontana manerantany aza ity viriosy vaovao ity dia nahatratra 24% ny fitomboana tamin'ity taona ity. Raha ny filazan'ny CNBC dia manodidina ny 10 miliara dolara amerikana ny refin'ny fitantanana ny Fund Medaly, mitovy amin'ny RMB 70 miliara eo ho eo. Tombanana amin'ny ambaratonga fitantanan-tapitrisany miliara dolara, ny vola miditra amin'ity taona ity dia manodidina ny 3,9 miliara dolara amerikana, mitovy amin'ny efa ho 30 miliara yuan; aorian'ny fanesorana ny saram-pitantanana sy ny fizarana fampisehoana, ny kitapom-bola dia manana tombony netina manodidina ny 2,4 miliara dolara amerikana, mitovy amin'ny 17 miliara yuan.
Araka ny filazan'ny Wall Street Journal, hatramin'ny 14 aprily, ny tahiry medaly dia manana vokatra mitombo 39% amin'ity taona ity. Na dia tamin'ny tsena volana martsa "Great Falls" izay mbola tsy hitan'i Buffett tamin'ny fahavelony, dia nahazo 9,9% ihany ny Medal Fund. Tamin'io volana io ihany, ny S&P 500 dia nilatsaka 12,51%, ary ny Dow dia nilatsaka 13,74%, samy nahatratra ny fihenan'ny isam-bolana lehibe indrindra hatramin'ny Oktobra 2008.
Tsy misy isalasalana fa ity volan'ny medaly ity, izay tsy namoy vola hatramin'ny nanombohany ary afaka mahazo fiverenana indray mandritry ny krizy ara-toekarena, dia maneho ny fanekena ny renivohitra nentim-paharazana eo amin'ny tsenan'ny cryptocurrency, ary tokony hitondra goavambe tombontsoa amin'ny tsenan'ny CME Bitcoin ho avy. fluidity.
Ny politika fanalefahana tsy manam-petra dia mety handrisika ny famerenana amin'ny laoniny Bitcoin
Na eo aza ny fihenan'ny vidin'ny fananana, ao anatin'izany ny vola crypto, ny fijerena ny toekarena manerantany dia mbola mampatahotra. Tao anatin'ny dimy herinandro lasa, mpiasa 26 tapitrisa no nangataka ny tsy fananan'asa any Etazonia fotsiny. Eo amin'ny sehatry ny orinasa dia manantena ireo orinasa mpikaroka fa hahavery vola an-tapitrisany dolara ny orinasa.
Noho izany dia tsy mahagaga raha nanao ezaka hamonjy olona, ​​orinasa ary orinasa iray manontolo ny banky foibe sy ny governemanta manerantany.
Mba hanamaivanana ny fandrahonana ny fitotonganana ara-toekarena natrehin'i Etazonia noho ny fiantraikan'ny valanaretina, dia nanao "hetsika lehibe" tsy mbola nisy toa azy ny Fed. Ny harivan'ny 15 martsa, ny Fed dia nampihena ny tahan'ny zanabola ho aotra ary nanangana programa fanalefahana habetsahana mitentina US $ 700 miliara. Tamin'ny 17 martsa lasa teo, ny Federal Reserve dia nanangana ny Facility Financing Paper Paper (CPFF) sy ny Business Dealer Credit mekanism (PDCF) mba hanomezana vola ho an'ireo namoaka taratasy ara-barotra. Ny 23 martsa lasa teo dia namoaka politikam-bola fanalefahana isa tsy voafetra (QE) ny Federal Reserve ary nanomboka "nividy" saika ny vokatra fampindram-bola rehetra teny an-tsena afa-tsy ny tahiry mba hanomezana fanampiana ara-bola ampy ho an'ny tsena.
Betsaka ny olona mino fa ny hetsika nifandimby nataon'ny Fed dia manasongadina fotsiny ny maha-matotra ny toe-draharaha amerikana.
Ny Bank of Japan (BOJ) dia nanamafy ihany koa io fironana io. Araka ny Nikkei Asian Review, mitanisa ireo olona mahalala an'io raharaha io, ny Bank of Japan dia mitady fividianana fividianana fividianana governemanta Japoney tsy misy fetra amin'ny fikasana hanentanana ny toekarena. Manantena ihany koa izy fa hanitatra ny programa fanalefahana isa-bola hampiakarana avo roa heny ny fividianana fifamatorana orinasa sy ny taratasy ara-barotra.
Na dia nandefa programa fividianana fifamatorana voafetra aza i Etazonia, dia nanamafy i Max Bronstein, mpikambana ao amin'ny ekipan'ny fampiasam-bola andrim-panjakana ao amin'ny cryptocurrency exchange Coinbase, fa "ny rafitra ankehitriny dia nirodana tanteraka."
Mihabetsaka ny olona mino fa ny fananana crypto itsinjaram-pahefana sy zara raha mahazo tombony amin'ity fironana ity mankany amin'ny vola sy ny sehatry ny vola tsy fantatra raha oharina amin'ny vola fiat an'ny banky foibe.
Ny talen'ny Goldman Sachs teo aloha, manager manager Raoul Pal, dia nanazava tamin'ny alàlan'ny gazety "Global Macro Investors" fanontana tamin'ny volana aprily fa mieritreritra izy fa mety hahita ny "rafitra ara-bola tsy mahomby" isika na "ny volan'ny rafitra ara-bola ankehitriny." ".
Bitcoin dia handray soa lehibe amin'ny tetezamita avy amin'ny rafitra ara-dalàna mankany amin'ny ekosistia nomerika. Mikasika an'i Bitcoin, Pal dia nanoratra hoe: "Ity dia rafitra sandan'ny nomerika feno, atokisana, voamarina, azo antoka, ara-bola sy ara-bola. Ny hoavin'ny rafitry ny varotra iray manontolo, ny vola ary ny sehatra fiasany dia tsy mijanona eo. "
Nanampy izy fa ny Bitcoin dia mety hahatratra $ 100,000 ao anatin'ny roa taona ho avy, ary hanipy satroka $ 1 tapitrisa aza rehefa miova tanteraka ny fomba fijery makro.
Taorian'ny politika "fanalefahana habetsahana tsy voafetra", mbola ho lasa "fananana azo antoka" ve i Bitcoin ao anatin'ny krizy ara-bola? Mikasika izany, Mike Novogratz, CEO an'ny Galaxy Digital, dia naminavina ihany koa fa Bitcoin dia mety hanaraka volamena miaraka amina fiakarana vidiny manan-danja, indrindra satria ireo fananana roa ireo dia tena zara raha mahita.
Xu Yingkai, mpiara-miasa amin'ny BlockVC, dia nilaza tao amin'ny Weibo fa ny 3,800 USD an'i Bitcoin dia mety ho ny farany ambany amin'ny fihenan'ny tsena. Taorian'ny fisasahan'ny Bitcoin (1-2 volana taty aoriana) dia nanomboka niverina tanteraka ny tsena. Rehefa vita ny fisasarana, noho ny hantsana Ny fihenan'ny fidiram-bola dia hifantoka amin'ny ondran'ny mpitrandraka harena an-kibon'ny tany, saingy ny tsindry fivarotana tsena vaovao isan'andro koa dia nitombo avo roa heny isan-taona, ary ny "fatin'ny fahafatesana" dia antenaina hihena tsikelikely .
Na izany aza, nanamarika ny olona sasany tao amin'ny indostria fa ny "fananana azo antoka" dia foto-kevitra taloha kokoa, saingy raha dinihina fa manana tsena midadasika i Bitcoin ary matanjaka lavitra noho ny karazany nentim-paharazana hafa ny vola azo avy aminy dia hitombo hatrany ny fangatahana amin'ny ho avy. Noho izany, aorian'ny fianjerana, azo antoka fa ho sitrana haingana kokoa noho ny fananana nentim-paharazana amerikana i Bitcoin. Amin'io fomba fijery io dia mbola afaka manana vinavina tsaratsara kokoa i Bitcoin, saingy amin'ny fomba fijerin'ny tsena ankehitriny dia tsy misy ny fanilikilihana mety hitranga.
Raha ny marina, taorian'ny filatsahana vetivety tao Bitcoin, ity vidiny ity dia manintona tokoa amin'ny antonony sy maharitra, ary mety ho ny fiantombohan'ny tsenan'ny omby manaraka.
Bitcoin dia manangona fahefana amin'ny tsenan'ny omby ho avy
Ny tatitra navoakan'i Bloomberg dia nilaza fa manangona fahefana i Bitcoin ho an'ny tsenan'ny omby. Na ny lohatenin'ny tatitra aza dia naneho fijery mazava- "Bitcoin Maturity Great Leap Forward". Bloomberg dia mino fa amin'ity taona ity i Bitcoin dia hamita ny fitsapana lehibe amin'ny tetezamita amin'ny vola quasi toy ny volamena.
Ny tatitra dia nanonona andianà antony mahatonga ny tsena Bitcoin ho matotra. Nanamafy ihany koa ny tatitra fa "raha toa ka azo ampiasaina ho mpitari-dalana ny tantara, dia mahazo solika kely ihany Bitcoin rehefa mamerina ny tsenam-bola."
Ho fanampin'izany, nilaza i Bloomberg fa Bitcoin sy volamena, fananana azo antoka roa amin'ny mason'ny olona, ​​dia antenaina handray soa indrindra amin'ny savorovoro eo amin'ny tsena farany ateraky ny areti-mifindra satro-boninahitra vaovao.
Saingy raha ny filazan'ny mpandalina cryptocurrency fanta-daza, raha mahatratra ny taha vidiny i Bitcoin, dia mety hiteraka tsena, amin'ny teny hafa dia nitombo ny vidin'ny vola.
Tamin'ny sabotsy lasa teo, mpanaraka Twitter 200 000 sy mpivarotra iray antsoina hoe CryptoYoda no namoaka ny andiany fandinihana ara-teknika farany, izay nanazavany fa ny firafitry ny tsena Bitcoin dia mirona hianjera noho ny fananganana fiakarana miendrika wedge sy ny lamina soroka - famantarana bearish roa nofaritan'ny boky fianarana - fa ny fahombiazan'ny Bitcoin tamin'ny $ 7475 dia hanongana an'io toe-javatra io, "manery ny pataloha fohy hanaisotra ny toerana misy azy ireo ary mandrisika ny fatratra ny hividy ireo toerana ireo":
"Ny fandrosoana amin'ny ambaratonga avo tahaka izany dia hitarika amin'ny fandrakofana fohy, ary ny habetsan'ny kaomandy mividy dia hitombo mafy, indrindra raha efa niditra tamin'ny ambaratonga fanoherana ambany ny mpividy."
Ny tiany hazavaina dia hoe raha tafita soa aman-tsara i Bitcoin, dia afaka manaporofo fa ny varotra ankilabao amin'izao fotoana izao dia tsy fisongadinana ambony, fa dingan'ny fanamafisana sy fitohizan'ny hetsika miakatra, izay mety hahatratra $ 8000 na avo kokoa aza.
Avi Felman-mpivarotra sy mpandalina ny vola crypto crypto, BlockTower, dia nahita famantarana teknika roa tamin'ny zoma lasa teo izay nanondro mazava fa tsy ho ela dia hanitsy ny vidin'ny Bitcoin:
Demark series (Tom Demark Sequential) dia mari-pamantarana ara-potoana, ao amin'ny tabilao labozia mandritra ny 3 andro dia miseho mitohy ny fivarotana. Ny toe-javatra mitovy amin'izany dia nitranga tamin'ny indroa teo aloha rehefa nilatsaka ny vidin'ny vola tamin'ny tapaky ny volana martsa sy desambra 2019, saingy nahatratra ny tampon'ny $ 10 500 tamin'ny fiandohan'ity taona ity.
Toa tsy mahavita mamaky ny salan'isa mihetsiketsika 50 andro sy 200 andro amin'ny tabilao labozia 3 andro i Ethereum amin'izao fotoana izao.
Ho fanampin'izay, nanambara i DonAlt fa na dia tsy nampiseho "fironana midina mafy" aza ny tsipika isan'andro, dia "tena akaiky ny fiparitahan'ny Bitcoin teo an-tampon'ny $ 10,000." Nasongadiny fa ny fironana vidin'ny Bitcoin dia hafa noho ny tamin'ny volana febroary Mitovy amin'ny firafitra ankehitriny.
Tatitra Bloomberg "Bitcoin Maturity Jump" dia nitatitra fa miomana amin'ny tsenan'ny omby lehibe i Bitcoin. Ao amin'ny tatitra, ny mpanoratra dia namelabelatra ny fifandraisana misy eo amin'ny Bitcoin sy ny index S&P 500, ny volamena, aotra ary ny zanabola miiba. Araka ny tatitra, ny fikorontanan'ny tsena dia nanafaingana ny tetezamita Bitcoin ho "volamena nomerika".
Amin'ny taona 2020, hotsaraina raha afaka manova ny Bitcoin avy amin'ny fananana vinavina mampidi-doza ho lasa "volamena nomerika". Raha ny fahitana ny fiovaovan'ny toetr'andro dia toa nihena ny fihenan'ny Bitcoin, raha nanomboka nitombo kosa ny tsy fetezan'ny tsena. Ny fanehoan-kevitra amin'ny tsena toy izany dia hahafahan'ny olona maro kokoa hamindra vola amin'ny fananana voaroaka.
Fotoana fandefasana: Sep-27-2020
btc fitoeran-javatra, fitoeran-javatra bitmain, crypto mining asic, kaontenera antbox, fitaovana fitrandrahana crypto, kaontenera antminer,